Azia Atsimo: Mariazy ifanarahana, firongatry ny bilaogy Hindi, fotoana ho an’ny fanovana fitondrana ao Pakistan, vehivavy ao Afovoany Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Septambra 2018 22:55 GMT
Taorian'ny fitsidihana tao amin'ny tanàna fahiny ao Kolkat, mihevitra tahaka ny ankizy i Sadiq M. Alam ao amin'ny Inspirations and Creative Thoughts, fa ny olona antitra no olona tena tsara tarehy indrindra eto ambony tany.
Adhunika Blog kosa niloa-bava nanohitra ny mariazy ifanarahana, izay mahazatra amin'ny mariazy amboamboarina.
Rehan of BangladeshWeb Blogs maneho ny fiavotan-tenan'i Bangladesh indray manoloana ireo sakana rehetra miaraka amin'ny mponiny 140 tapitrisa ary mbola mitàna ny fitomboan'ny harin-karena anatiny mihoatra ny 6 isanjato.
JazzyYaris ao amin'ny Kuzu-Bhutan Weblog manontany ny antony mahatonga ny andrim-panjakana sivily ao Bhutan ho mahantra.
Kafila Blog mamaritra ny firongatry ny bilaogy Hindi sy ny fiantraikany eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Indiana.
Sudhansu ao amin'ny Desicritics manadihady tamin'ny fomba mitsikera ny E-commerce (Varotra elektronika) sy ny vavahady fandoavam-bola ao India ary milaza fa tokony ho matotra izany.
Blowing in the Wind milaza fa mihoso-drà ny tanan'ny lehiben'ny minisitra ao amin'ny fanjakana Indiana ao Bengal Andrefana satria nitifitra ireo mponina tao Nandigram, 100 km mahery avy ao Calcutta ny polisy mba hanaparitahana ny fihetsiketsehana ataon'ny mponina ho fanakanana ny fandroahana azy ireo. Miezaka manadio ny faritra midadasika mba hanamboarana faritra toekarena manokana ny governemanta.
The Glasshouse manadihady ny antony mahatonga ny lehiben'ny Fitsaran'i Pakistan ho voaroakan'ny filoha.
Kashif Aziz ao amin'ny Chowrangi manontany tena raha fotoana ho an'ny fanovana fitondrana ao Pakistan izao.
Groundviews, tetikasa momba ny asa fanaovan-gazetin'ny olom-pirenena Sri Lankey mitatitra momba ny fampijalian'ny mpitandro ny filaminana an'ireo mpanao gazety ao Jaffna.
Niro ao amin'ny week in Sri Lanka manazava ny fepetra iainan'ny vehivavy Sri Lankey ao Afovoany Atsinanana.